NextMapping | Etu aga - esi kwụsị ịsehie na ebe ọrụ
We nyochara ọtụtụ puku ndị isi na otu n'ime ihe ịma aka kachasị elu nke ekpughere bụ:
Etu esi kwusi inwe obi abua n’ebe oru.
Nnyocha nyocha NextMapping
Changezọ mgbanwe dị na teknụzụ na azụmahịa na-eme ka o sie ike ịhapụ ndị ọrụ itinye aka na ịmepụta ọdịnihu.
A na-agbagha ndị ọrụ na mgbanwe na-aga n'ihu na ha atụkwasịghị ndị isi ha obi ma ọ bụ ntụziaka nke azụmaahịa. Àgwà ndị dị ka ịkatọ mmadụ, ịkwa emo na 'anyị na-agaghachi' site na ndị ọrụ nwere ike ịkụda mbọ kachasị mma maka idu ndu maka mgbanwe ịkwọ ụgbọala.
Isi ihe mere ndị ọrụ ji enwe obi abụọ bụ:
Ha ahụla atumatu ka amalitere ma daa mmiri wee si otú a bụrụ ndị na-enweghị mmasị banyere atụmatụ 'ọhụụ'
Ha ahụla na ndị isi na-anwa ire nnukwu mgbanwe na-enweghị etinye ndị ọrụ ma ọ bụ jụọ maka ntinye.
A gwala ha na teknụzụ ọhụụ na-aga ime ka ihe niile ka mma.
A na-amanye ndị ọrụ ịgbanwe ngbanwe ọ bụla na-etinyeghị aka na ndị ọrụ itinye aka na mgbanwe n'otu n'otu.
Omenala ekweghi ekwe - ndi oru n’enwe obi enyo na ndi isi nwere mmasi na odi nma ha.
Enweghị elekwasị anya na ị na-azụ ma na-eduzi ndị ọrụ iji nwee ihe ịga nke ọma na mgbanwe na-abịanụ.
Nzota nke inwe obi abụọ na ebe ọrụ dị na idu ndu, ịgbanwe onye ndu na ime ka ọrụ ebe ọrụ.
E nwere a akụrụngwa akụrụngwa na egwuregwu n'ebe ọrụ. Ndị mmadụ ga-aza na-etinye ha, na-arịọ maka ntinye ma jiri ha kpọrọ ihe.
Cynism na inwe obi abụọ bụ ngwaahịa nke ndị mmadụ na-eche na ọ nweghị onye na-eche banyere ya.
Ndị a bụ mkpịsị ugodi maka otu esi akwụsị mgbagha n'ebe ọrụ:
Etinye ego na ọdịnihu-njikere iduzi - nyere ndị ndu aka ịbawanye ya nkuzi na ikuzi ndu ka ha nwee ike iso ndị otu ha nwee mmekọrịta dị mma karị.
Kpebisie ike na ọdịbendị arụmọrụ na-agbanwe agbanwe - setịpụ atụmanya na a na-akwụghachi arụmọrụ ụgwọ. Nke a pụtara ịmekọrịta ndị ọrụ na-adịghị mma na-enweghị atụ na atụmanya doro anya na ijide ya maka mmetụta ha nwere na ndị otu.
nwere mkparịta ụka dị mkpa kwa oge site na otu na mkparịta ụka otu onye nkuzi. Gwa ndị nwere obi abụọ isi wee dị njikere ịza ma kwado onye ọrụ ahụ site na ajụjụ ya na nsogbu.
Kpọọ enyí n'ime ụlọ - na nzukọ nzukọ nke ụlọ ọrụ nke nwere ike ịgụnye nzukọ ndị mebere kwetara na enwere obi abụọ nakwa na a ga-atụ anya ya. Dezie ihe ga-adị iche n'oge a na ihe kpatara mgbanwe a ga-eji arapara.
Tinye aka na a 'ịgbanwe ndu' nke putara ikeriri ọhụụ ebe ị na-aga, na-emekọrịta ma na-achịkọta data ndị ọrụ, kekọrịta nsonaazụ nke data ahụ. Soro ndị ọrụ iji nyere aka ịmepụta atụmatụ mmemme.
Kekọrịta mkpesa na-enwe ọganihu kwa izu. Kekọrịta Intranet gị, site na vidiyo zigara ndị ọrụ niile site na ozi email, ziga dashbolo na-egosi etu ọkpụkpọ oku siri kwaga mgbaru ọsọ mgbanwe.
Gbanwee ndị ekwe ekwe gị na ndị ndu mgbanwe. Gwa ndi ajuju ka ha nyere gi aka ‘gbasaa okwu a’ ma tinye ha na mgbanwe a site n’itinye ha oru ndi gha agba ha aka ma gbaa ha ume.
Ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị bụ: "Ndị ọrụ anyị ọ bụla nwere ikike inwe obi abụọ ebe ọ bụ na akụkọ ihe mere eme anyị banyere otu anyị sirila mee mgbanwe?"
Ọ bụrụ na ị nwere ike ikweta na ị ghọtara 'gịnị kpatara' enwere obi abụọ, ị nwere ike ịgbanwe maka ịkwụsị ya na egwu ya. N'ọtụtụ ụzọ, uru inwe ndị na-arụ ụka nwere bụ na ọ nwere ike ime ka anyị lelee mgbanwe anya n'ụzọ nyocha nke ọma. Ndị na-arụ ụka ụka na-enyekwa echiche na-enyere ndị isi aka ịkọwapụta ma mee ka uru nke mgbanwe ahụ sie ike.